‘TEETANASII’ (TETANUS)!-Fayyaan Qabeenya! Dr. Dhinsaa – Beekan Guluma Erena
‘TEETANASII’ (TETANUS)!-Fayyaan Qabeenya! Dr. Dhinsaa	Beekan Erena
HEALTH June 19, 2016OROMO
Dhibeen kun kan inni ittiin dhufu, ‘toxin’ (summii) kan ‘tetanospasmin’ jedhamu, kan baakteeriyaan ‘Clostridium tetani’ jedhamu erga qaama keessa seenee maddisiisuuni! Innis, narvii maashaa qaamaa to’atan hubuun dhibee fida!
*Akkamittiin namatti dhufa!?
– Madaa haala qulqullina hin qabneen uumamu:-
1. kan sibiila danda’een waraanamuun dhufu,
2. Madaa awwaaraan faalame,
3. Kan rasaasaan uumamee fi faalamaa,
4. Caba banamaa fi faalamaa,
5. Lafa lilmoon waraanaman,
6. Da’umsa booda qarabaa danda’ee fi qulqullina hin qabneen daa’ima handhuuruu; kunis dhibee kana daa’ima reefuu dhalatetti akka dhufu godha!
7. Infekshinii irga ilkaanii fi ilkaanii,
8. Madaa ciniinnaa bineensaan uumamu,
9. Namoota talaallii ga’aatti utuu hin fudhatin madaan irratti uumamee fi kkf wantoota baakteeriyaan sun qaama keenya keessa akka seenaniif karaa saaqanii fi kan dhibee kanaaf nama saaxilanidha!
*Mallatooleen baay’inaan mul’atanis:
1. Goguu fi jabaachuu maashaa alanfattuu!
2. Jabaachuu maashaa mormaa fi dugdaa!
3. Waa liqimsuu dadhabuu!
4. Jabaachuu maashaa garaa irraa fi
5. Gonnonnaa’uu qaamaa kan dhukkubbiin walqabatedha! Kanneen biroonis:-
– Hoo’ina qaamaa ykn fuursaa,
– Ol-ka’iinsa dhiibbaa dhiigaatii fi
– Dabaluu rukuttaa onnee!
Miidhaan guddaan inni namarraan ga’us:
1. Caba lafee,
2. Hubamuu sirna hargansuu; karaa gonnonnaa’uu maashaa sirna hargansuufi kan banama ujummoo qilleensaa ‘laryngeal spasm’ fi
3. Lubbuun darbuu dha!!
1. Talaallii isaa ga’aatti fudhachuun mala dhibee kana ittiin ofirraa ittisan isa guddaadha!!
2. Madaa uumamu hunda haala gaariin qulqulleessuu fi qilleensi akka gaariitti madaa sana seenee akka ba’uuf madaa ukkaamsuu dhiisuu!!
iilota danda’anii fi qulqullina hin qabne fayyadamuu dhiisuu!
← DANDEETTI GEGGESUMMAA KEE KARAALEE ITTIN GUDDIFATTU !-CAREER ROCKETEER .COM Barresituun : Margaaret Jub Kan Afaan Oromootti hiikee ana Tamasgeen Axinaafutti. Waxxabajii 9,2016 Shaambuu,ORIMIYAA irraa!
ABJUU-Abonketi D Fayissa’tiin -Mudannoo Ajaa’ibsiisoo →